China iron oxide mavo 311/313/920 mpanamboatra sy mpamatsy | Shencai Pigment
1. Ny pigmen mavo vy oksida dia ampiharina mivantana amin'ny simenitra ho toy ny pigment na miloko amin'ny akora vita amin'ny precast sy vokatra vita amin'ny beton isan-karazany. Karazan-javatra vita amin'ny beton miloko anatiny sy ivelany, toy ny rindrina, gorodona, valindrihana, andry, lavarangana, arabe, toeram-pijanonana, tohatra, toby, sns., Toy ny taila tarehy, taila, gorodona, tafo, terrazzo, mozika taila, marbra artifisialy sns. 2. Ny pigment mavo vy oksida dia mety amin'ny karazana loko rehetra sy ny zavatra miaro, ao anatin'izany ny rindrina anatiny sy ivelany, rindrina vita amin'ny vovoka, sns. Azo ampiasaina amin'ny loko kilalao, loko haingon-trano, loko fanaka, loko elektroforetika ary karazana verinia. Ny pigmen mavo vy oxide dia mety amin'ny fandokoana ny vokatra plastika, toy ny polymère thermosetting sy ny thermoplastic, ary ny vokatra vita amin'ny fingotra, toy ny fantsom-pitaterana anaty fiara, fantsom-pitaterana anaty fiaramanidina, fantsona anaty bisikileta, sns. 4. Ampiasaina betsaka amin'ny fananganana marbra artifisialy, fandokoana terrazzo. Tondra-drano, loko menaka, loko, fingotra ary loko hafa. Nampiasaina ho mpanelanelana pigmentan'ny oksida vy, toy ny fanaovana mena vy oksida, mainty vy, sns. Ankoatr'izay, ny pigment mavo oxide vy dia azo ampiasaina amin'ny karazana kosmetika, taratasy, fandokoana hoditra.
"SHENMING" marika vovoka vita amin'ny volo vita amin'ny vy oxide mavo 313 dia mankafy ny lazan'ny tsena avo ary amidy tsara manerana ny firenena ny vokatra.
Raha toa ianao ka liana amin'ny fividianana vovo-dronono vy mavo mavo 313 avy any Sina, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY no safidinao tsara indrindra.
Anaran'ny varotra IRON OXIDE YELLOW
Fanondroana loko Zavamaniry mavo42 (77492)
Specifications Hevitra ato Anatiny (Fe2O3) % ≥86
Fitrohana solika ml / 100g 25 ~ 35
sanda pH 3 ~ 7
Gravity manokana g / sm3 4.1
Fonosana varotra Ao anaty kitapo 25kg / kitapo 600kg avy eo nofonosina
Previous: oksida vy mena 110/120/130/180/190
Manaraka: Black oxide mainty 722/750